Classical Kwakaita Profile, Architectural Kwakaita Profile, Waterproof Kwakaita Profile - Sunjie
Free Zvandakashanda Muchiedza 10 Years ruzivo akatungamirira Profiles Mazana yokutevedzera nokuda vakatsaurwa Low mutengo, high quality. 5-7 kushanda mazuva pakusununguka
Standard MAX 3M urefu, customized yakarebawo zviripo. Clear / Frosted / Gwara Cover diffuser kuti sarudzo. Silver anodized, chena upfu zvemapuranga, dema anodized iripo. OEM Magadzirirwo iripo.
CE, RoHs akafarirwa, 5 makore garandi High unhu 6063-T5 Aluminum chiwanikwa kutorwa Polycarbonate mashoko pabutiro diffuser
Sunjie Technology Co., Limited rakaumbwa muna 2013, Kubva pakagadzwa, kambani yave ichiiswa kumusoro-kuguma Linear chiedza mugadziriro kusanganisira tsvakurudzo, budiriro, kugadzirwa uye okutengesa. The zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa mukuru-mugwaro hotels, mukuru-mugumo vezvokutengeserana Real Estate, hofisi chiedza uye yakawanda zvavo munzvimbo. Nakidzwa mukuru mukurumbira mu Europe uye United States. The muchiso ndiyo vakawanda ezvivako, kuvheneka vagadziri akasarudza nyanzvi chiedza brand.After makore unremitting kukura, pamwe basa utariri, R & D simba uye kugadzirwa kugona.